Tareenka Usak Oo Lagu Diyaarshay Qalabka Kiimikada Xamuulka ee Xamuulka qaada | RayHaber | raillynews
[12 / 02 / 2020] TCDD 5-ta Agaasime Goboleed ayaa qabtay 87 Milyan oo Kaabayaal ah	44 Malatya
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityUsakta Tababar Qalabka Kiimikada ah
25 / 01 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
Afyonkarahisar 37004 lambarka tareenada oo horay usocda subaxnimadii hore, ayaa Ushak ka tallaabay heerkii ay ka soo gudubtay gaari xamuul ah oo lagu soo riday 22 oo kiimikooyin ah gaari gaari ah. Iyadoo la raacayo saameynta ay leedahay foostooyinka kiimikada leh ee ku jira sheyga ee TIR ku wareegsan deegaanka.
Darawalka TIR, isagoo dhex maraya heerarka xuddunta ee caqabadku ma xidhin codsiga, wuxuu maqlay maqaayad ka shaqeeysata qalabka korontada, laakiin sababta oo ah waxay aad ugu dhawyihiin gawaarida. Meelahaas waxaa la karantiilay sababtoo ah kiimikooyinka ku shubay deegaanka. Xiritaanka muddo yar ka dib markii laga fujiyey gawaarida tareenka ayaa loo furay gaadiidka.
Kooxaha ka socda Agaasinka Deegaanka iyo Magaaleynta ayaa bilaabay baadhitaanka iyagoo qaadaya shaybaarka goobta. Wadada Uchak-Denizli halkaas oo shilku dhacayey lagu xiray gaadiidka. Mas'uuliyiinta ayaa bilaabay baaritaan lagu sameeyay shilka.
Ogeysiiska Qandaraaska: Wakiilka Ka Hortagga Maqalka
Gawaarida waxaa lagu qabsaday Saliid Tanker ah oo laga soo qaaday TMO Pier (Video)
Tareenka Cadaadiska Heerka Isgoyska ee Usak (Video)
80 Sannadle ah oo Wagon ah oo lagu gubay magaalada Usak (Video)
Tareen tareen rakaab ah ayaa ku dhacay baabuurka 1 dhintay
Dhaqdhaqaaqa ee Butler ayaa si dhakhso ah u dhammayn doona
6 Sebtembar Express ayaa Xirmay Akhisar
15 Wagon Qaadashada Qatarta Halista ah ee Iswiidhan